सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँमै - Karobar National Economic Daily
सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँमै
query_builderMay 26, 2017 9:22 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility300
काठमाडौंः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा पेस हुन चार दिनमात्र बाँकी रहँदा सरकारले सिंहदरबारको शक्तिलाई तल्लो तहमा लैजाने गरी बजेट तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी बजेटले सिंहदरबारमा केन्द्रित शक्तिलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउने गरी बजेट तयार भइरहेको बताए ।
“अधिकतम् रकम स्थानीय तहमा जाने गरी बजेटको तयारी भइरहेको छ,” उनले भने, “केन्द्रले सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछ र खर्चको निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै हुनेछ ।”
उनले अब केन्द्रभन्दा प्रदेश शक्तिशाली र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह शक्तिशाली हुने भन्दै सिंहदरबारको अधिकारलाई तल झार्ने बताए । “बजेट प्रस्तुत भएपछि सांसदहरूले आफ्ना गाउँपालिका र नगरपालिकामा कति बजेट गयो भनेर रातो पुस्तकमा भेट्याउने छन्,” व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा उनले भने ।
अर्थले जनसंख्या धेरै भएको, भूगोल ठूलो भएको र अति विकट स्थानीय तहलाई बढी बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अर्थको भनाइ छ ।
अर्थका अनुसार पुनर्निर्माण र आगामी वर्ष हुने दुई निर्वाचन कार्यक्रमलाई लक्षित गरी बजेट आउनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले नयाँ नीति ल्याएर पुरानो किसिमबाट स्रोतको बाँडफाँट हुने बताए । उनले भने, “पुरानै ढाँचा हो, तर बजेट बनाउने तरीका फरक छ । सोहीअनुसार काम भइरहेको छ ।” उनले क्रमागत योजनालाई पर्याप्त रकम दिने गरी काम अघि बढेको पनि जानकारी दिए ।
अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी पनि वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा जान पाउने गरी बजेट तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले सांसदहरूलाई बजेट दिने विषयमा अन्योल रहेको भन्दै सुझाव माग गरेको थियो ।
जनता केन्द्र्रित बजेट ल्याउन सांसदहरूको सुझाव
सांसदहरूले भने जनतालाई नयाँपन अनुभूत हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाएका छन् । अर्थ समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बजेटले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि जनता केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले जनता केन्द्रित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । “अबको बजेट परिवर्तन ल्याउन सक्ने हुनुपर्छ,” उनले भने, “एकीकृत बस्तीलाई प्राथमिकतामा राख्न, जंगल सुरक्षाको विषयमा सोच्न र विकासको अनुभूति गराउन सक्ने खालको बजेट आवश्यक छ ।”
सांसद इच्छाराज तामाङले पूर्वाधार विकासलाई सम्बोधन गर्नु अहिलेको बजेटको आवश्यकता रहेको बताए ।
“तीन तहको संरचनामा बजेट बाँडफाँट वैज्ञानिक र प्राविधिक तरिकाले गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने । सांसद कमला पन्तले पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणमा लाने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिइन् ।
सांसद गरिमा शाहले विगतमा भएका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिईन् । अर्थमन्त्री महराले भने सांसदहरूका अधिकांश सुझावलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट कटौती
सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत जाने करोडौं रुपैयाँ बजेट नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको र मोटो रकम पनि दिइएकाले यो कार्यक्रमको औचित्य नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यक्रम नै कटौती गर्न लागेको हो ।
यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी ३ करोड रुपैयाँ बजेट दिइँदै आएको थियो । यसरी एक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिइने बजेट निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सो क्षेत्रका सांसदहरू सम्मिलित कमिटीले आयोजना छनोट गरी खर्च गर्दै आएका थिए ।
बजेट अर्थमन्त्री सिंहदरबार